SHEEGIDDA SIRTA AH EE CANABKIINNA JILICSAN CANJEERO EE DAYRTA - KU DHEJINTA GEEDKA CANAB EE XILLIGA DAYRTA
Cinjirka jilicsan ayaa iska leh qoyska canabka.
Cabbirka dilka ah inta badan wuxuu u egyahay liana geedka.
Xilliga jiilaalka, caleemaha canab ah ayaa si joogto ah cagaaran, iyo dayrta, ku dhowaad ka hor bilawga ah ee dhaxan, waxay noqdaan kuwo guduud leh oo leh buluug buluug ah oo dhalaalaya oo koraya on cawska cas.
Laakiin cid kastaa way ogyihiin sida si sax ah u dacaayadda.
Annaga canabkeen jilicsan ayaa koraaya 3 mitir. Dhererka geedka canabka ah wuxuu gaari karaa 30 mitir. Wuxuu awood u leeyahay inuu koro, iyada oo aan wax dhibaato ahi jirin, dusha sare ee guriga, haddii uu yahay dhagax ama guri.
Geedka canuggu wuxuu bixiyaa caleenta cufan. Uma baahna taageero dheeri ah, maadaama uu dhirta ku xiran yahay darbiga iyada oo ay ugu wacan tahay koobabka wax lagu naqshadeeyay. Meelkani wuxuu qaboojiyaha u qaboojiyaa si fudud u dulqaadan karaa baraf ilaa -24 digrii.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo daliishi karo canab jeexan, laakiin ugu fudud oo sahlan ayaa soo saaraya gooyn. Xaaladdan oo kale, geedo waxay xidhan tahay had iyo jeer.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso gooynta
Wixii beeritaanka dayrta, gooynta waxay bilaabaan in la goosto oo la gooyo guga ama xagaaga laga bilaabo laamaha, oo caleemaha si cad loo arki karo. Sidoo kale gooyn ayaa laga goostay caleemaha lagu rinjiyeeyey isla midabka, waa inay noqdaan kuwo caafimaad qaba.
Bannaanka u yaqaan qarsoodi yar, marka qaansooyinka, gooyn waa in yar oo jajaban. Gooyn qalafsan sidoo kale ma aha mid ku habboon. Iska yaree tuubada laga nadiifiyo antennae iyo kore. Cuts ka dhig 2 cm ka hooseeya caleen.
Dhererka gooynta gooyuhu waa inay ahaataa qiyaastii 20-30 cm oo ay leeyihiin ugu yaraan 4 burooyinkeeda u bislaaday.
Kadibna kuulo ku riday galaas biyo ah ka hor inta bilawga ah ee xididdada. Iyadoo dhalashada ee xididdada canab ah waxaa lagu beeray karaa meel diyaar ah.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo daaweynta iyo ka hortagga cudurada geedka canabka ah.
Xulashada guntooda beerto
Gooynta beeritaanka waxaa lagu diyaarin karaa adiga, laakiin waxaad soo iibsan kartaa mid. Marka aad dooranaysid seedling canab, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u haysato joogitaanka ama maqnaanshaha dhaawacyada farsamada, waa in aysan noqon.
Marka aad dooranaysid noocyada kala duwan ee canabka, waa inaad fiiro gaar ah siisaa qaar ka mid ah noocyo kala duwan oo ah nooc dumar ah oo ubax ah waa in la beeray oo kaliya agagaariyahahaddii kale, ma jirto wax laga yaabo in sugitaanka beergooyska. Geedo waa in si wanaagsan loo horumariyo.
Ka iibso canjaha caleemaha si fiican uga samee weelasha. Ma iibsan kartid canab iyo caleemaha daciifka ah ee nidaamka xididka.
Geedka canabka ah, dhab ahaantii, waxaa loo tixgelinayaa in aan la geyn ciidda aad u baahsan. Waxayna u kori kartaa meel kasta oo ka mid ah dhinaca dusheeda, sida waqooyiga, koonfurta, bari, ama galbeed. Run, laga bilaabo galbeedka iyo qaybo waqooyiga beerta caleemuhu waxay u koraan si yar oo cabbirkooda mana badalaan midabka illaa iyo inta uu dhaxan yahay marka hore.
Laakiin, weli waa meesha ugu wanaagsan ee ay ku koraan canabku waa dhinaca qorraxda.
Kobcinta sabiibta wanaagsan waxay u baahan tahay diyaarinta ciidda si taxaddar leh Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo horay, si ay dhulka wax yar oo is dulfuulan iyo cufan leh qoyaan. Dhulka ayaa qoday si qoto dheer ah 60-80 cm, inta aad u baahan tahay dhaqaaqa ciidda, i.e. lakabka sare waxaa loola jeedaa lakabka hoose.
Ka dib markii qashin qoto dheer ay bilaabaan inay qodaan godadka dhulka.
Canabyada caleemaha ayaa koraaya nooc kasta oo ciid ah. On chernozems culus iyo carrada dhoobada, for neefta wanaagsan, lebenkii jabay iyo burbur ku dhaco hoos ugu ceelkii, iyo lakabka sare waxaa lagu qasi jiray ciid webiga. Nooca noocan ah ayaa lagula talinayaa. bacrimiya iyo fosoorka.
Xannhullada Sandy waa sabool yihiin humus, waxayna sidoo kale ku darsadeen nafaqooyin yaryar, oo ay ku jiraan nitrogen. Qalabka dhagaxyada wax ku biirin, maadaama nooc noocan ah ee carrada uu si fiican u neefsan karo.
Goobaha ugu wanaagsan ee beeritaanka iyo canabkiisa xayawaanka ah waa carradu bacaadka ah, waa kuwo aad u fiican, si ay u hadlaan, oo ay ku raaxaystaan ​​aeration.
Carrabka Sandy ku jira humus yar, iyo ka hor inta laga beerto waxay u baahan yihiin codsi dheeraad ah ee Bacriminta organic: peat, compost ama humus. Marka lagu daro organics, waxay sidoo kale ka dhigaan Bacriminta macdanta, oo ay ku jiraan superphosphate.
Aad u degso
Geedka canjiga ah ee lagu talinayo xilliga dayrta, sida beeritaanka dayrta waxay u ogolaanaysaa canab si ay u kordhiso xilliga sii kordhaya, sidaa daraadeed, markaa, waxay timaaddaa horumarinta hore ee dhirta, laakiin waxay ku xiran tahay xaaladaha heerkulka wanaagsan.
Beerta xilliga dayrta waa mid wanaagsan, sababtoo ah uma baahnid inaad raadiso meel lagu keydiyo canab. Cinabta canabka ee xilliga dayrta waxaa ugu wanaagsan in la gooyo Sebtembar ama Oktoobar, ka dibna aan u qalmin, sababtoo ah geedka ma degi karo.
Canab Girlish lama beeray agagaarka bullaacadaha, maaddaama caleemo dhicid xilliga dayrta ay dhigi karaan socodka oo dhan. Waxaa lagu beeray karaa balakoonka, cimilada qalalan, canab ah waa in la waraabiyaa. Sidoo kale, kala duwanaanta noocaas ah waxay u baahan tahay in laga ilaaliyo dhaxan.
Geedo badan oo canab ah ayaa la beeray karaa si aan caadi ahayn, laakiin qoto dheer beerto waa in lagu hayaa.
Canabyada jilicsan looma beeray derbiyada lakulanka, maadama uu malabku hoos u dhaco miisaanka geedka. Goobta ugu fiican ee cagaarka waxay noqon doontaa derbiyada la taaban karo iyo kuwa lebenka ah, dayrarka dhirta, garaashka, caleenta, gaaska. Under caleemaha derbiyada alwaax ma qudhmi doonaa.
Daryeelka waa in la qaataa in geedka canabka ah uusan korin karin saqafka foornada ah. Sababtoo ah, saqafka hoostiisa miisaankiisa hoos ayuu u jabi karaa.
Canab Girlish waxaa ugu wanaagsan in lagu beeray aagga iftiinka ah, sababtoo ah isaga wuxuu jecel yahay iftiin badan, laakiin waqti isku mid ah, iyo hooska-dulqaad leh, koraan karaa hooska qayb ahaan. Qalabka iyo dabaylaha qabowgu si buuxda uma haboona.
Grapes si fiican loo beeray carrada la beero. Markaad beertay maahan muhiim inaad isticmaasho khibrado ama farsamooyin khaas ah oo khaas ah. Laakiin, dhulka waa lagama maarmaan in la qodo, iyo dhowr toddobaadyo ka hor laga beerto waxaad u baahan tahay si loo diyaariyo god.
Qiyaasaha caadiga ah ee ceelasha dhulka waa 50 cm oo ballaaran oo qotodheer, laakiin waa inaad weli fiiro gaar ah u yeelataa xajmiga nidaamka xididka.
Dheecaan ayaa laga sameeyaa xagga hoose ee ceelasha, lebenkii jabay, ciid, dhagax la jajabiyey oo seexan. Lakabka ciidda waa inuu noqdaa qiyaastii 20 cm.
Warshad lagu beeray foosto loo diyaariyay habkan labadii sano ee ugu horeysay uma baahna quudinta.
Markaas isku dar ah ciidda, kaas oo ka kooban dhulka caleenta, compost iyo ciid, waxaa lagu shubaa galay, iyo godka oo dhan ku shubay sare. Qoorta aasaasiga ah ee canabku waa inuu ku sii jiraa heer dhulka ah.
Si aad u ogaato qoto dheer saxda ah ee canab beerto waxay u isticmaalaan ulo joogta ah, oo ay tahay inaad sameyso calaamad ah 40 cm, oo hoos u dhigta ceelka. Canab waxaa lagu beeray tuulo yar oo horay loo sameeyay.
Laakiin, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso nuuc yar. On geedo of burooyinkeeda sabiib ah canab ku yaala dhinaca bidix iyo midig, waa in lagu beeray dhulka si ay burooyinkuna waxay la socdaan trellis ee isla diyaarad. Tani waa in la sameeyaa si markaa ay u noqoto mid sahlan.
Gooynta canab beeray waa la leexiyay iyo waraabiyay 4 baaldiyo oo biyo ah. Ka dib oo dhan, si dhakhso ah isdhexgalka nidaamka xididka leh ciidda, waraabinta badan oo loo baahan yahay, iyo dhirta la aqbali doono si dhakhso ah.
Cinabta Girlish, si ay u ilaaliyaan nidaamka xididka laga bilaabo keydka, bannaanka u badan ku talinaynaa beeritaanka at qoto dheer oo ka badan 50 cm, iyo carrada carrada - in ka badan 60 cm. Indeed, xaqiiqda, dhabta ah ee xididada waxay ku yaalaan qoto dheer ee 40 arag
Carrabku waa mid bacrin ah oo dusha sare leh, si fiican ayuu u kululaa, iyo xididdada canabku koraan halkan. Waraabinta waxay qaadataa biyo yar, halka bacarimidu hoos u dhacayso tirada bacriminta macdanta.
Canab Girlish waa la beeran karaa oo maaha meel qoto dheer, kaliya 40 cm.
Canab waxaa lagu beeray fogaan ah 30 cm oo xariiqda safka, si aysan taageeradu u faragelin hoygiisa. Noocyada qaabka loo yaqaan 'elongated sleeves'. Waxay bixiyaan fursad ah inay abuuraan kaydka qoryaha dilka ah, waxaad ka fogaan kartaa dhinacyo kala duwan. Suumanka dhaadheer ayaa si sahlan hoos ugu soo dhacaya dhulka. Noocyo canab ah ayaa lagu beeray fogaan ah 50 sentimitir midba midka kale.
Ka bixitaanka ka dib
Si aad u daryeesho canabka Girlish waa mid sahlan. Waa abaarta aan dhicin ee abaarta iyo isku-jaridda aan loo baahnayn. Laakiin si ay canab si ay u koraan oo ay qurux badan, waxay u baahan tahay daryeel taxadar badan oo u baahan in la abuuro xaalado kobcin raaxo leh.
Xilliga xagaaga, haramaha ayaa laga saaraa, kaas oo u muuqda waqti ka waqti, loosen dhulka iyo, haddii la soo bandhigo, xidido xididada leh. Borotiinada cawska ah ee Pristvolny peat, compost ama humus. Mulch xilliga dayrta isla markiiba lagu aasay ciidda.
Xilliga hurdada, guga, canab waa in la gooyaa talooyinka la barafeeyey ee laamaha, ka saar caleemaha, caleemaha waxyeeloobay, iyo sidoo kale kuwii koray xudduudda.
Saplings of canab Girlish ka dib markii beerto koraan si aad u tartiib ah, sababtoo ah dhirta ku bixiso xoogeeda oo dhan on formation of nidaamka xididka. Laga soo bilaabo da'da saddexda, canab waxay koraan illaa 3 mitir hal xilli. Caleemaha waxay leeyihiin anteeno, sababtoo ah iyaga ayaa uga mahadceliya iyaga oo dusha sare saaran.
Ka dib markii uu soo dego, sanadaha hore, samee qalfoof ka mid ah baadiyaha sabiib ahsi ay u aragto qaabka aan u baahannahay. Doolowyada beerta gooyay caleemaha ugu weyn ee mitir. Iyo caleemaha ka soo baxa dhinaca, la siiyo jihada saxda ah adoo xiraya ilaa lignification.
Ka dib markii la dhiso caleemaha canabkeedii gabadhu, waxay sanad walba sameeyaan manjooyin nadaafadeed, i.e., caleemo daciif ah oo dhaawacan ayaa la jaraa. Ka saar caleemaha kuwaas oo hor istaaga kobaca tayada ee taajka.
Tan iyo markii geedka canabka ah aad u dhaqso badan, ma aad mari kartid manjooyin. Haddii kale, waxaad heli kartaa weel adag oo caleemaha ah, oo u keeno muuqaal dabiici ah oo dheeraad ah waxa kaliya oo la isticmaali karaa oo kaliya isticmaalida trim.
Canab-sireed la jarjaray oo dhexdhexaad ah, kaliya saddex ama afar jeer. Burbur kasta wuxuu isticmaalaa hal baaldi biyo ah (10 litir). Xilliga xagaaga kulaylka ayaa badanaa la waraabiyaa. Bishii Juun, canabku waxay u baahan yihiin, marka lagu daro waraabinta, dharka sare. Waxay sameeyaan nitroammofoska, iyo muddada koritaanka firfircoon - waxay sameeyaan Bacriminta adag.